Bhaibheri Archives — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Bhaibheri Bhaibheri Bhaibheri Bhaibheri Bhaibheri Bhaibheri Bhaibheri Bhaibheri Bhaibheri Bhaibheri Bhaibheri Bhaibheri Bhaibheri Bhaibheri
Muupenyu hwangu, Ndava vagura mwaka apo ndanga zvechokwadi chakaita kushanda kunze. Pandaiva kuchikoro Ndaingoda kuva Buff zvakakwana kufadza vasikana (ini vakakundikana). Mumwedzi ndisati muchato wangu Ndaiedza kushanda hanimunu yangu Beach muviri. mazuva aya, Ndiri kungoedza nechokwadi ndinorarama apfuura maviri angu. vavariro vangu vakatsinhanisa mumakore, asi chii haana kuchinjwa sei kuvimbika tiite idzodzo.
Zvichida uri muropa uchida kushanda kunze-danidzirai kubva kushamwari dzangu kuposita pics uye mavhidhiyo kurovedzwa kwavo poda rimwe zuva. Asi kana uri wakafanana neni, vavariro dzako kukwira uye pasi sezvinoita mbudzana pamusoro trampoline. Ko kana zvichiita basa rako kunze rwakatora nokusingaperi, Zvisinei? Ungada kuva uchida?
Basa Hard Mubayiro
Panguva Winter yeOlympic mwedzi wokupedzisira ndakanga vachishamiswa sezvo ini ndichizviona mheni nokukurumidza bobsledders uye highflying snowboarders. Ndaiororwa dzavo emitambo kunaka, asi ndakanga akatonyanya mwoyo kana Ndakafunga pamusoro akaranga nokudzidziswa anofanira kutora kuwana ikoko.
Panoperera nechimwe chiitiko apo nokukunda Vamhanyi akamira pamusoro Kumukundi wacho podiums, ne…
5 Words Vs. 5 nhema
Nzira isu sei shoko inoenderana ndiani zviri kubva. Ndikupe muenzaniso. Kana mutorwa anofamba kwandiri mumugwagwa uye oti, "Regai kwereta makiyi motokari yako chaivo nokukasika. Ndinoda kuwana mari kubva yenyu gurovhisi bhokisi,"Zvichida ndingadai kumutarira akafanana ndiye anopenga uye kufamba kure. Asi kana mudzimai wangu akanga kuuya kwandiri vachiti zvimwechete, Ndingada kumupa makiyi pasina wechipiri kufunga. Tinoteerera uye kupindura zvakasiyana zvichienderana ari kutaura.
Sei pamusoro mumwe Muchiitiko. Kana mumwe weshamwari dzangu dzakanaka vakaomerera kuti ndinofanira kuzviisa pasi pechiremera chake hwakakwana pamusoro upenyu hwangu hwose, zvichida ndingadai kumutarira akafanana ndiye hupenzi ugoenda dzimwe shamwari itsva. Zvingava zvakanaka kuti ini kupindura kuti nzira. Asi chii kana Mwari pachake akati ichocho chinhu?
2 Timothy 3:16 anoti, "Rugwaro rwose Mwari akafemera." Ndiko kwete ndima yose, asi mashoko mashanu iwayo vanoti zvakakwana kufungisisa kwoupenyu hwose. Chokwadi chokuti mashoko Rugwaro ndiwo mashoko aMwari pachake kuchikosha. Uye ndinofunga avo shanu…